Global Voices teny Malagasy » Tarika Mpihira Bokanté Manome Hira Amin’ny Teny Kiriolona · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 16 Aogositra 2017 4:59 GMT 1	 · Mpanoratra PRI/PRX's The World Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Amerika Avaratra, Karaiba, Goadelopa, Kanadà, Fifindràmonina, Mediam-bahoaka, Mozika, Zavakanto & Kolontsaina
Mpikambana ao amin'ny tarika Bokanté avy amin'ny kaontinanta efatra, mampiseho fanintonana avy amin'ny gadona Karaibeana, hira Afrikana Tandrefana, sy ny mozika milamina Vinanin'i Mississippi Delta ny mozikan'izy ireo. Sary: GroundUP Music
Ity tantara avy amin'i Sonia Narang  ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org  tamin'ny 24 Jolay 2017. Navoaka eto indray izany noho ny fifanaraham-piarahamiasa eo amin'ny PRI sy Global Voices.
Nisarika ireo mpiangaly mozika avy amin'izao tontolo izao, hatrany amin'ny Morontsiraka Andrefana ao Canada ny Fetibe Vancouver Jazz. Nitondra feo miavaka manitra gadona Karaibeana, hira Afrikana Tandrefana ary hira milamina Mississippi Delta teny an-tsehatra ny tarika iray. Miantso ny tenan'izy ireo hoe Bokanté  izy ireo, izay midika “fifanakalozana” amin'ny teny Kiriolona ao Karaiba.
Lehibe tao amin'ny nosy Frantsay-Karaiba any Guadeloupe i Malika Tirolien, lehiben'ny tarika sady mpamoron-kiran'ny tarika mpihira. Mipetraka any Montreal izy ankehitriny, ary amin'ny tenindrazany, Kiriolona ny ankamaroan'ny hirany, izay fifangaroan'ny teny Frantsay sy ny fiteny ao an-toerana ao amin'ny nosiny.
“Ho ahy, tena zava-dehibe tanteraka ny teny Kiriolona, ary tena mirehareha amin'izany aho,” hoy i Tirolien. “Izany no antony nametrahako betsaka azy ao amin'ny hirako. Ary fiteny mahafinaritra ny Kiriolona, “hoy izy nanampy.
“Mitondra izany tsiro Karaibeana izany aho, ary mitondra kely amin'ny gadona gwo ka koa, izay gadona avy ao Guadeloupe,” hoy izy, ary manazava ny ezaka nifarimbonana nahatonga ny raki-kiran'ny tarika vao haingana “Strange Circles “.
“Amin'ireo hira rehetra, misy ny fifanakalozana. Isaky ny milalao ny olona iray, dia mitondra ny momba azy ireo ao amin'ny hira,” hoy izy.
Ny hira iray ao amin'ny rakikira vaovao dia “An Ni Chans,” lohateny amin'ny teny Kiriolona izay midika hoe “Tsara Vintana aho.” Nilaza i Tirolien fa ohatra mahazatra amin'ny fomba nanafangaroan'ny tarika ireo karazana gadona mahasarika ao anatin'ny hira tokana izy io.
“Te hanana gadona avy ao Guadeloupe aho,” hoy izy. “Saingy avy amin'ny toerana samihafa ny rehetra ao amin'ny tarika, izay nanova kely ny gadona. Mametraka ny fisiany ny olon-drehetra, manana zavatra lazaina amin'ny mozika ny tsirairay. Noho izany, tahaka ny adihevitra sy fifanakalozana ara-kolontsaina marolafy izany.”
Nilaza i Tyrolien fa “tena tsara vintana ity hira ity voahodidin'ny fiarahamonina sy ny fianakaviana tia antsika sy manome hery antsika”. Ny tenany manokana dia avy amin'ny fianakaviana iray mpanohana sy mpanakanto – poeta ny raibeny, mpitendry piano ny renibeny ary mitendry zavamaneno maro ny rainy.
Nandritra ny fahatanorany tao amin'ny nosy Guadeloupe, voasariky ny fanahy, R & B, hip-hop, jazz i Tyrolien, ary iray amin'ireo ankafiziny indrindra i Michael Jackson. Nifindra tany Canada izy taty aoriana mba hianatra jazz tao amin'ny Oniversiten'i Montréal, ary nanomboka nanafangaro ny hip-hop andrenivohitra tamin'ny jazz sy ny gadona Karaibeana.
Malika Tirolien, lehiben'ny tarika mpihira Bokanté, mivonona hiaka-tsehatra tamin'ny fampisehoana tao Vancouver vao haingana. Teratany avy ao amin'ny nosy Frantsay-Karaiba ao Guadeloupe izy ary monina ao Montreal ankehitriny. Sary: Sonia Narang
Amin'ny maha-vehivavy mpitarika ny Bokanté azy, mampiasa mozika mba hamoronana fifanakalozana miaraka amin'ny mpihaino azy i Tirolien ankehitriny rehefa mihira amin'ny teny Frantsay sy Kiriolona.
“Tsy dia maro ny olona mahay ny teny Kreola, ary mametraka kely an'i Guadeloupe ao anaty sarintany ny hirany,” hoy izy, no sady nilaza tamim-pihomehezana hoe: “Eny, izany no antenaiko.”
Tena nientanentana izy nahita ny lahatsarin'ireo mpianatra ao Malezia mihira ny iray amin'ireo hirany amin'ny teny Kiriolona.
“Ohatra iray mampiseho izany fa azon'ny olona avy lavitra hiraina ity teny ity”, hoy i Tirolien. “Mahatonga ahy hahatsiaro tena ho faly, mirehareha, feno fanetren-tena, sy feno fankasitrahana manana ireo olona avy lavitra mihira amin'ny teny Kiriolona izany”
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/08/16/105485/